Bogga ugu weyn / Qubeyska jikada / Qulqulka Shidaalka Dheriga / WOWOW Dheriga Buuxi Feekada Dusha Ka Saaran Nickel Burushka
Qulqulka Dheecaanka Dheecaanka ee WOWOW Dusha Ka Kariyaha Foornada ee Nickel Nadiifiya
Awooda nadiifinta fudud ee agabkeedu waxay ka dhigeysaa qasabka jikada buuxinta mid ku habboon isticmaalka nadaafadda.
Waxay ka samaysan tahay qalab bir ah oo bir aan kala go 'lahayn, kushiinka jikada dheryaha buuxiya ayaa si weyn u adkaysta miridhku.
Dheecaanka dheriga ee laba jibbaaran ayaa si fiican loo jeexjeexay, sidaa daraadeed, ma fududa in la burburiyo ama qaab ahaan loo baxo.
Sheyga waa fududahay in la isticmaalo iyada oo aan dadaal badan lagu qabsan.
2311100 tilmaamaha rakibaadda
Ku dar taabasho caadi ah jikadaada oo leh shaashaddan quruxda badan ee dib loo eegi karo ee Isku-Darka Dhoolatiga Mashiinka ah 2311100 oo ay ku jiraan silhouette si qurux badan u eg.
Waxay ku habboon tahay qashin-kariska weyn ee weelka lagu kariyo makiinada cuntada lagu kariyo si deg deg ah loogu buuxiyo dheriga karintaada adiga oo aan u baahnayn in lagu soo qaado saxanka jikada weelka.
Noocyada Qalabka: Ku daboolan hoosta Saxeexa Qalabka dammaanadda noloshiisa oo kooban.
Xiritaanka laba-laabku wuxuu u oggolaanayaa macmiilka inuu ku damiyo biyaha darbiyada ama tuullada, sidaa darteed xakamaynta socodka biyaha marxaladda isticmaalka.
Jirka dareeraha ah ee iskuxiran naxaasta ayaa si aad ah ugu adkeysan kara miridhku iyo ikhtiyaar aad u fiican si looga hortago heerkulka sare.
Meel bir ah oo ku dhegan derbiyada isku dhegan oo iskuxiran oo isku wareegan ayaa u oggolaanaya miiraha dheriga inuu isku laabto markii aan la istcimaalin.
Faahfaahinta: Dhererka: 9-1 / 2 ″ (hoosta dhinaca sare ee tuubada).
Xajmiga Dhererka: 2-3 / 4 ″ (bartamaha godka darbiga si uu uga soo baxo marinka).
Xawaaraha orodka: 1.8 gallon-daqiiqaddii Qulqulka.
SKU: 2311100 Categories: Qubeyska jikada, Qulqulka Shidaalka Dheriga Tags: Nickel caday, Dheecaanka Dheriga, Dhagax buuran
Dheriga Faylka Foojiyaha Isku laaban Double Handle burush Nickel
Waxaan ku arkay qaar halkaas jooga lacag badan. Tani waxay ahayd qiimo aad u wanaagsan, waxaan u haystay si xirfadaysan u rakibey laakiin tuubiste ayaa ogolaaday inay ahayd qiimo aad u fiican oo tayo fiican leh.
Waxaan u soo iibsanay kuwan tubada, maadaama aan haysanay tuubooyin kala duwan oo darbiga ka soo galaya halkii aan ka heli lahaa kala dheelitirnaan caadi ah oo lagu qaso.
Wax walba si wanaagsan ayaa loo sameeyay. Si yaab leh ayuu u shaqeeyaa. Dhismo culus. Naqshad adag oo wanaagsan. Weligood ha waaraan!
Muuqaal nadiif ah iyo nidaamka waalka laba-geesoodka ah ayaa fiicnaanaya si looga fogaado dhibcaha ka dib marka la xidho. Dhibaatada ku jirta buuxinta dherigan ayaa ah in gacmuhu aysan laba jibaaran dhejiska sidaas darteed waxay umuuqataa inay xoogaa hoos u dhaceyso. Cusboonaysiinta: Shirkaddu waxay aragtay dib-u-eegiddayda oo way isoo gaadhay oo waxay tidhi waxaan helay alaab cilladaysan oo waxay ii rartay mid cusub oo aan wax su'aalo ah la iga weydiin. Way saxsanaayeen, midka cusub ayaa u muuqda mid fiican. Adeeg macaamiil weyn
Cabsi badan kama hadli karo wax ku saabsan buuxinta dherigan. Qof kasta oo gurigayga soo booqda wuu jecel yahay. Adeegga macaamilku wuu qurxoonaa maan weydiisan karin adeeg fiican.
Jacaylka naqshada. Dareemo adag. Waxaan doonayay inaan mid ka iibsado Delta oo ku yaal guriga Depot sidan oo kale laakiin waxay ku kacday ku dhowaad 400 $, markaa waxaan go aansaday midkan ka dib markaan akhriyay faallooyinka. Waan ku faraxsanahay inaan helay, laakiin waxaan dhajin doonaa sawiro goor dambe kadib markii WOWOW la rakibay. Muuqaal aad u casri ah oo jecel sida loo dareemayo.
Aad ayaan ugu qanacsanahay buuxiyaha dherigan. Tuubisteyda ayaa rakibtay sifiican ayeyna u shaqeysaa. Waan jeclahay sida ay u egtahay oo sicirku aad ayuu macquul u ahaa. Iibiyaha ayaa si fiican ula jaanqaaday ugana jawaabayay su'aalahayga ku saabsan alaabta.
Waan jeclahay buuxiyaha dherigan. Marnaba ma maleyn karin sida ugu habboon ee ay noqon laheyd inaan helo. Biyaha si habsami leh ayey u socdaan weligoodna ma kala burayaan. Waxa kale oo aan haystaa dheriga qaxwahayga oo ku ag yaal shookhadayda oo gacanta ayaa si fiican u gaadhaysa buuxinta kaydka.
Waxaan ku qasbanaaday inaan soo iibsado daloolka miiskayga oo aan sameeyo wax kale oo ka hooseeya wax ka beddelka si aan u galo. Gacan-qabsiga si caqli-gal ah looma dhigo. Mid waa inuu ka fekero boosaska shidida / offka ee labada gacmood si uu ugu saxo labadiisa iyo dusheedba. Taas ka sakow waa qurux lacagta.
Dheriga buuxiyaha dherigu ma ahayn mid qaali ah, waxayna umuuqataa mid fiican oo sifiican u shaqeeya Waa madow dhameys ah. Waxay ku fidsan tahay ilaa gubi hore. Si fudud ayey ugu dhaqaaqdaa wayna fududahay in la rakibo. Waxay leedahay togag socodka biyaha wanaagsan.
Qiimo weyn, waxay u shaqeysaa sidii la filayay. Dhameystirku wuxuu umuuqdaa mid wanaagsan oo tayo fiican leh. U maleynayaa inay bilaash tahay. Waxaan jeclaan lahaa inay la timaado laba gacmood sida ugu badan ay sameeyaan laakiin dhammaantood waxaan kugula talinayaa.
Kuwani waa wax weyn oo lagu daro jikadayada. Qandaraaslaha howsha qabanaya aad buu ugu riyaaqay isagu wuxuu raacayaa mid kaligiis. Dhamaan wanaag! Qof kastaa wuxuu moodayay inay gebi ahaanba qabow tahay.
Aad ayaan ula dhacay tayada iyo rakibidda fudud. Aad ugu fiican jikadeyda ganacsiga. Waxaa loo isticmaali karaa meel kasta. Dhab ahaan waan kugula talinayaa.
Kaliya waxaan dib u habayn kusameynay jikada oo waxaan kudarnay buuxiyahan dheriga quruxda badan. Si hagaagsan loo dhisay oo si fudud kor ugu kacay!
Jacaylka qasabaddan. Shaqeeyaa weyn! Qalabka laba-laabka / dabka ayaa si weyn u shaqeeya si aan looga gaarin kariyaha kulul si loo daarto.
Waxaan ku isticmaalnay tubada musqushayada. Rakiibintu waxay ahayd mid fudud wayna fiicantahay!
Tuubadaani gabi ahaanba waa qurux badan mana garaaci kartid qiimaha! Waxaan ka walwalayay inay jilicsan tahay laakiin si fiican ayaa loo sameeyay.
Maalintii ka dambaysay markii aan helay badeecada, waxaan bilaabay rakibaadda qasabaddayda dheriga. Qaddarka cajaladda dunta ee PTFE ayaa ku filan. Ka dib markii ugu horeysay ee aan ku guuldareystay inaan rakibo sababtoo ah cajalad aad u badan, cajaladda xarigga ah ee haray ee PTFE ayaa wali kufilan rakibkeyga labaad. Kadib markii rakibida la dhammeeyay, waxaan sameeyay baaritaanno badan, mana jirin wax daadad biyo ah!
Alaabtu waa deg degtay, waxaanan helay badeecada maalintii saddexaad ee iibsiga ka dib. Jikadeyda cusub ee la cusbooneysiiyay waxay si deg deg ah ugu baahan tahay inay ku rakibto qasabad. Jiko aan lahayn qasabad gebi ahaanba ma shaqeyn karo si sax ah. Waxaan u baahanahay inaan ku rakibo tuubada buuxisa dheriga darbiga. Cajalad jaban oo tayo sare leh oo PTFE ah ayaa aad muhiim ugu ah shaqada rakibida. Waad ku mahadsan tahay shaashadda dunta tayo sare leh ee loo yaqaan 'PTFE thread seal seal' oo uu bixiyay iibiyaha. Qaddarku aad buu u ballaaran yahay waana igu filan yahay inaan isticmaalo 2-3 jeer.
Tuubbada miiraha dheriga ayaa jikada jikada ka dhigaysa mid wax ku ool ah. Waagii hore, marwalba waxaan u baahnaan jiray inaan qaado dher culus si aan biyo uga helo qasabada hoosteeda ama aan ugu dhex shubo dheriga weel kale. Tani waa wax aad u dhib badan oo caajis badan. Markii aan dayactiray jikadayada cusub, waxaan si guul leh ugu qanciyay ninkeyga inuu rakibo tuubada buuxisa dheriga. Tuubada buuxisa Piper pot ayaa ka mid ahayd isku dayyadeenii aadna waan ugu qanacnay tuubadan. Badanaa waxaa laga sameeyaa naxaas, dusha sarena waa lakabka lakabka elektarooniga ah ee madow, oo umuuqda mid aad u heer sare ah oo qurux badan. Ka dib marka lagu rakibo jikada, waxay noqoneysaa xidigta jikadeena. Tan iyo markii aan kireysanay tuubbooyiin xirfadlayaal ah si aan wax u rakibo, wax walba si habsami leh ayey u socdeen, iyo qasabadda faleebada dheriga wowow ayaa si qurux badan u shaqeynayay illaa iyo hadda, waan jeclahay!
Sanduuqa ay alaabtu soo gashay ayaa oggolaaday in la raro iyada oo aan wax calaamado ah bir ku cadayan birta. Qaybta lagu rakibay darbiga way fududahay in la kaco maaddaama aan ka fiirineyno dhismaha cusub. Hadal u yeelista gelinta gidaar jira. Badeecada waxay la timid bakeeri allen ah si loogu rakibo lammaanaha. Wudlku wuxuu ahaa wax la yaab leh haddii ay woudl sidoo kale ku jiraan cajalad yar oo teflon ah laakiin sanduuq kasta oo qalab ah oo ka shaqeynaya tuubooyinka horay ayuu u haystay. Buuggu waa sahlan yahay in la raaco. Hubi intarnetka si aad u aragto darbiga aad u baahan tahay inaad ku rakibto tuubada maadaama aad rabto inay awoodi karto inay buuxiso dheriyada laakiin isla mar ahaantaana ha ku dhufan microwave-kaaga korkaaga.
Waxaan dhawaan rakibnay buuxiyaha dheriga, qof walba wuu shakiyay oo saadaaliyay ma isticmaali doono gabi ahaanba. Way qaldan yihiin! Markaad sii gabowdid buuxiyuhu wuxuu kaa caawinayaa inaadan dheriga culus biyo ugu qaadin kariyaha. Inta badan kuugga ama qof kasta oo wax karsada maalin walba wuu jeclaan doonaa tan oo wuxuu u arkaa mid waxtar leh. Waan jeclahay naqshada iyo taabashada. Walaaca kaliya ee aan qabaa waa marka shooladda la shito oo dheriga buuxiya uu kuleylka dushiisa saaran yahay, wax dhaawac ah ma geysan doontaa? Ilaa hadda illaa iyo markii aan haysto 6 wax guba waxaan isku dayayaa in aanan isticmaalin gubiyaha ku habboon dusha dheriga dheriga. Lagu taliyay.
Qurux badan, oo sifiican loo sameeyay buuxi dheriga. Ma arkin tayada ka saraysa qiimaha. Ku rakibida si toos ah Mid kale la'aantood ma samayn lahayn. Shayga si aad u wanaagsan ayaa loo soo baakadeeyay, mana jiro dabacsanaan jilicsan oo ka tirsan cutubka. Adag oo siman. Dhamaadku waa qumman yahay.
Faaliyaha dherigaan ayaa si qurux badan loo sameeyay wuxuuna kadhigaa mid cajiib ah jikadayda cusub. Tumbiyuhu wuxuu si fudud u rakibey buuxiyaha dheriga. Waxay umuuqataa mid xasilloon oo sahlanaanta isticmaalka waxay siin doontaa sannado farxad qoyskeyga.
Rakibaadda fudud, waxay umuuqataa mid fiican. Dareemo adag iyo kontaroolada ayaa siman. Kaliya waxay ku jirtay toddobaad. Jeclahay illaa iyo hadda.
Kaliya rakib., Waxay umuuqataa mid fiican